FAMBOLEN-KAZO DIRMRS TOAMASINA – Ministère des Mines et des Ressources Stratégiques
FAMBOLEN-KAZO DIRMRS TOAMASINA
Tontosa ny Asabotsy 27 Febroary teo ny fambolen-kazo 2021 izay nokarakarain’ny Fitaleavam-paritra ny MMRS sy ny BCMM Toamasina.
Nitarika izany hetsika izany tany an-toerana Andriamatoa Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika Fidiniavo RAVOKATRA. Ankoatra ireo mpiara-dia amin’ny Minisitra dia nifanome tanana tamin’ny fianakaviamben’ny DIRMRS sy BCMM Toamasina ihany koa ireo mpandraharaha amin’ny sehatra harena an-kibon’ny tany.
Natao tao Ambohimasoa, CR Vohitranivona, District Brickaville izany ary zana-kazo miisa 1000 fototra, nahitana ny acacia sy kininina manitra izay mifanaraka amin’ny toe-tany no novolena nandritra izany.
Ankoatry ny fambolena moa dia nanara-maso ny fitomboany sy fanirian’ireo zana-kazo voavoly ny taona 2020 izay hita fa naniry tsara.
« Ho rakotr’ala Madagasikara »
“Izay mamboly hazo, tia tanindrazana. Izay mandoro ala, mandoro tanindrazana”
← FITSIDIHANA TAO AMIN’NY SERANAN-TSAMBON’I TOAMASINA – 26/02/2021
FANKALAZANA NY 8 MARTSA 2021 →